संचारकर्मी युवतीलाई बसपार्कमा यौ’नकर्मी सम्झेर युवकले बार्गेनिङ गर्दा, युवतीको खुट्टा समाएर माफी माग्नुपर्यो (भिडियोसहित) « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौंका बसपार्क, कलंकी, रत्नपार्क वीर अस्पताल आसपासमा, त्यहाँको आकासे पुलमा सांझ पख यौ’नक’र्मीहरु छ्याप छ्याप्ती फेला पर्छन । सार्वजनिक स्थानमा उभिएरै यौ”नका लागि वार्गेनिगं भइरहेका दृष्य पनि सजिलै देख्न सकिन्छ । कुनै युवती वा महिला सांझ पख ति स्थानमा एक्लै उभिएको देख्यो की यौ”नक’र्मी सम्झिएर युवतीको खोजिमा रहेकाहरु वार्गेनिगं गर्न पुग्छन् । कतिपय युवती र महिलालाई त्यो कुराको खबर हुँदैन । यदि आफन्त र साथीलाई पर्खिएर बसिरहेको युवतीलाई अपरिचित युवा आएर मेरो कोठामा जाउँ भन्यो भने को होला ?
काठमाडौंको बसपार्क आसपासको आकासे पुलमा आफ्नो साथीलाई पर्खेर बसेकी यि युवतीले पनि त्यस्तै अवस्थाको सामना गरेकी छन् । पछाडी ब्याग बोकेकी यि युवती क्याम्पस पढ्ने जस्तो देखिन्छिन् । उनी साथीलाई पर्खिरहेकी छन् । यत्तिकैमा एक युवक आउँछन् । उनले जाउँ भन्छन् । ति युवती छक्क पर्छिन । तपाई को हो म किन जाने भनेर प्रतिप्रश्न गर्छिन । तर पनि ति युवाले जिद्धि जोड्दैनन् । जाउँ न मेरो कोठा यहिँ नजिकै हो के भन्छन् । ति युवतीले किन जाने नचिनेको मान्छेसंग भन्छिन् ।
यति भन्दा पनि ति युवाले पिछा छोड्दैनन् । पहिलो पटक हो की क्याहो ? भनेर फेरी जिस्क्याउँछन् । अनि ति युवतीले गाली गर्छिन । तपाईजस्ताले गर्दा यो मुलुक बिग्रिएको । म पनि तपाईको दिदी बहिनी जस्तै हुनसक्छु । म यहाँ मेरो साथीलाई पर्खेर बसेको हो । तपाईको घरका दिदी बहिनीलाई अरु कसैले यसरी मेरो कोठामा जाउँ भन्न आयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ? ति युवतीले भनेको सुन्छि । तपाई यहाँवाट जानुस् भन्छिन् तर ति युवा ढिट चल्दैनन् । अझै लाज पचाएर तर्क गर्न खोज्छन् । उनको बोली सुन्दा मा”दक प’दा’र्थ से”वन गरेको जस्तो सुनिन्छ ।
ति युवतीले भन्छिन् मेरो पनि दाजुभाई छन् म उनीहरुलाई पर्खिएको हुनसक्छु । मेरो दाईभाई आउन सक्छन् । युवतीले त्यती भन्दा पनि त्यो युवक अझै तर्क गर्छन । नेपालगन्ज, कोहलपुर घर बताउने ति युवकले आफुले पहिलो पटक मा’द’क प’दा”र्थ खाएको बताए । काठमाडौंमा पनि लोकल र”क्सि पाइने रैछ मैले कोदोको र”क्सि खाएर आएको छु । नेपालगन्जमा च्याउ खेती गर्ने बताउने ति युवकले आफ्नो नाम प्रिन्स बताएका छन् । त्यहाँ उभिएर यो घटनाको समान गरे एक संचारकर्मी हुन । बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस